अस्पतालमा उपचाररत ३८ जनाको स्वास्थ्य सामान्य, कोरोना संक्रमित १० जना निको भए
बाह्रखरी - शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७
काठमाडौं । देशैभर हालसम्म साढे ९ हजार जनाको कोरोना भाइरसको आशंकामा पीसीआर विधिबाट नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हालसम्म आरडीटीमा ३८ हजार ८९ जना र पिसिआर विधिबाट ९ हजार ४०७ जना गरी जम्मा ४७ हजार ४९६ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।
“गत २४ घण्टामा तीन हजार ७९१ जनाको कोरोना भाइरसको आशंकामा नमुना परीक्षण गरिएको छ,”,उनले भने,“आज देशैभरका अस्पतालका आइसोलेसनमा काठमाडौ उपत्यकामा ३ जना र उत्यकका बाहिर ८६ गरी जम्मा ८९ जना रहेका छन् ।”
आज देशैभरका क्वारेन्टाइनमा १२ हजार ९८५ जना रहेका उनले जानकारी दिए ।
बिहीबार बेलुका कोरोना संकक्रमण देखिएका भोजपुरका २६ वर्षका पुरुष फागुन ३० गते साउदी अरबबाट हिमालयन एरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौं आएका थिए । ती युवकमा आरडीटी पोजेटिभ देखिएपछि पुन: पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती युवकको सम्पर्कमा रहेका आफन्तहरुको सबैको नमुना संकलन गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमितको अवस्था के छ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या ४८ जना रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटालका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १० जना निको भएका जानकारी दिए ।
उनले भने “कोशी अञ्चल अस्पतालमा हाल २८ जना रहेका छन् तर भोजुरको युवकलाई त्यही ल्याईदै गरेको त्यस अस्पतालमा हुदाँ २९ हुनेछन् । नारायणी उक्षत्रिय अस्पतालमा ५ जना, भरतपुर अस्पतालमा २ जना, धवलागिरि अस्पतालमा १ जना, धनगढीस्थित सेति अस्पतालमा १ जना उपचाररत रहेको छन् । भने सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।”
७८ जनाको थ्रोब स्वाब संकलन
मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरको स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक प्रयोगशालाले ७८ जनाको थ्रोब स्वाब संकलन गरेर कोशी अस्पतालमा परिक्षण भइरहेको छ । उदयपुरको चौदन्डीगडी र त्रियुगा नगरपालिका वरिपरि नमुना परिक्षणका लागि संकलन गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश २ का आठै जिल्लाका २७ विभिन्न स्थानमा १५ सयभन्दा बढीको नमुना संकलन गर्न नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवा विभागको टिम त्यहाँ गएर नमुना संकलन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ मा प्रकाशित
दाङ । दाङको घोराहीमा बञ्चरो प्रहार गरी श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बेलुवा निवासी... १ घण्टा पहिले
काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्‍न स्थानहरूमा बाढी पहिरो र डुबानहरूबाट प्रभावित विभिन्‍न जिल्लाका स्थानमा... १ घण्टा पहिले
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको उत्तरपश्चिम गाउँ हेलम्बु र भोताङको शीरबाट बगेका दुई छुट्टाछुट्टै नदीबाट आएको बाढीले बगाउँदा तीन विदेशीको मृत्यु भएको... २ घण्टा पहिले
पोखरा । बाढीबाट प्रभावितलाई राहत वितरण तथा उद्धारका लागि मनाङ गएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाल पोखरेलसहितको टोली खराब मौसमका कारण... २ घण्टा पहिले